Ambositra : Nahazo LP ireo 5 lahy voarohirohy nitrandraka vato tsy ara-dalàna
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2020 → septembre → 4 → Ambositra : Nahazo LP ireo 5 lahy voarohirohy nitrandraka vato tsy ara-dalàna
Ny Alatsinainy 31 Aogositra 2020 teo no natao, ny fitsarana ireo olona 5 voarohirohy nahakasika ny fitrandrahana vato « Amazonite » tao Ampiringa Fokontany Talaky Kaominina Andina. Ireo olona ireo izay tsy iza, fa nahitana ny tompon-tany misy ny carrière sy ny filohan’ny fikambanana « Soa Iombonana » ka nahazo ny rariny.
Nafahan’ny Fitsarana teto Ambositra vonjimaika (LP) ireo olona ireo, ny alatsinainy lasa teo, ka
nankasitraka ny Fitsarana izy ireo noho ny fijoroana amin’ny fahamarinana sy ny fijerena ny madinika tompon’ny tany, eo anatrehan’ireo ankasomparany ataon’ireo mpanjakazaka ny tanin’olona.
Nandritra ny fiaraha-midinika nataon’ireo fokonolona niarahana tamin’ny Filoha Nasionalin’ny Tafo Mihaavo Atoa Louis Gonz Mamindraibe no nanambaran’ireo solontenam-pokonolona, fa vonona hijoro amin’ny marina izy ireo.
Ny TAFO MIHAAVO ihany koa naneho ny fahavononany amin’ny fiarovana ny fokonolona amin’ireo tsindry mahazo azy ireo, satria rehefa mahantra sy bado ny fokonolona dia tsy ho tratra ny tanjona dia ny fiarovana ny Tontolo iainana ho fampandrosoana lovain-jafy.